Buddhatrends yakasikwa muMontreal, Canada kugovera vakadzi vanobva kumativi ose enyika, mukana wekutarisa zvakasiyana neboka revanhu uye kuzviratidza ivo nenzira chaiye kuburikidza nenzira yepakutanga yavanopfeka.
Kambani inofunga kuti vakadzi vanofanirwa kupfeka chero fashoni yemafambisirwo avanoziva nayo uye vanogona kuiwana nokukurumidza paIndaneti.
Buddhatrends zvakareiyo-stop-shop-yese ye Free Free Spirits kunze uko:Vanyori, Vafambi, Bohemians, Hippies, uye vakadzi voseani hazvidi kuwedzeraasi ku kuratidzira hupenyu hwavo hwakanaka kuburikidza nenzira yavo yakasiyana.Mweya wakasununguka matiri unoda rusununguko pane zvose zvatinoita, kunyanya nzira yatinotakura nayo. Ndeipi imwe nzira iri nani yokuratidza nayo yako yezvokwadi pane nzira yaunopfeka uye maitiro aunoita. Buddhatrends haisi shopu yeWanderers asi mutungamiri wehupenyu hwevakadzi vemazuva ano akajekeswa vanoziva kuita zvinyorwa zvavanoda zvechokwadi.
PaBuddhatrends, tinotenda musununguko rwenyu kusarudza mararamiro enyu, uye tinokoshesa nguva yenyu, kunyaradzwa uye hongu, inotarisa. Nokudaro, tinoshora nyika kuti tiwane zvakanakisisa zvigadzirwa kuti tiwedzere pane zvatinowana, zvinhu zvinosanganisira MAZVIMBO EZVIMBO. Tine handpick chete izvo zvigadzirwa zvinotifarira nekuda kwepakutanga, kushandurana, zvakasiyana, uye kunyaradza. Zvatinounganidza zvinotarisirwa kuparadzira chisarudzo chako chemavara, asi iwe hauzombogoni kuwana zvinhu zvinowirirana nemafambisirwo emuBuddhatrends nekuti tinotenda mukurumbira wako, kuti iwe unofanirwa rusununguko rwekusarudza uye zviri kwauri kuti uite kutarisa kunokodzera unhu hwako!
SeMweya Midzimu pachedu pachedu, ndezvatinosarudza kuunza chete zvakanakisisa kwauri.Tenderera kuburikidza nekuunganidza kwedu uye tifambidzwe mune hupfumi hwekufuka zvakasiyana Overalls & Jumpsuits, kunyengera Plus Size Dresses, Linen Palazzo Pants uye midziyo yekubudisa mavara ako echokwadi. Makosheni edu akasarudzwa akasarudzwa mweya wehupenyu mutsva, wakasununguka uye wakasunungura sezvinodiwa iwe wega. Buddhatrends inokupa zvipfeko uye zvigadzirwa zvemukana wose. Sakanidza uye fambisa uye tora kugadzirisa mafashoni kubva kugungwa kusvika mumugwagwa!
Kunze kwekubatsira iwe kutarisa zvakanakisisa mumutauro wako wakasiyana, tinoedza kuita zvese kutenga kutenga chiitiko chakanaka kwauri. Ndicho chinhu chikuru chekutanga kukupa iwe basa rinobudirira kumuteereri, kunyanya kurongeka kushandiswa kwekutengesa, kukodzera kutumira nguva, uye mutemo wekusununguka usina kubhadhara.
Kana iwe uri muenzi wekutanga, tinokugamuchira nemoyo wose uye tine tariro yokuti iwe uchafadzwa nezvinhu zvose zvekutsvaga kwako neBuddhatrends. Kana iwe uri mutsigiri wedu kwenguva refu uye mutengi achidzoka, tinokutendai nokuda kwekutsigira kwenyu uye kuvimba matiri uye kusanganiswa kwezvigadzirwa.
Tinokoshesa mhinduro yako, ingava vachinditsigira kana kuti inovaka uye iri kuramba ichishanda kuvandudza chiitiko chako chekutenga nesu.